Tsy fifampitokisana izao, tsy fahatokisan-tena… | NewsMada
Tsy fifampitokisana izao, tsy fahatokisan-tena…
Tsy mahomby ny fitondrana HVM. Izay ny fijerin’ny maro, indrindra ireo mitaky ny fialan’ny filoha eny amin’ny kianjan’ny 13 mey. Tsy izay anefa ny fahitan’ny sasany azy, fa zavatra hafa: tsy misy nahavita ny vitany tao anatin’ny 50 taona mahery, vonona ny hifampitaha amin’izany izy…
Inona no eo? Mihamahantra andro aman’alina ny vahoaka, manjaka ny kolikoly, anjakan’ny vahiny ny tany sy ny harem-pirenena… Na izay fandriampahalemana aza, tsy azo antoka. Koa inona no mahatonga ny fiheveran-tena sy ny hambompo diso toerana ho tsy misy toa azy hatramin’izay?
Fatra-panilika ny tsy fahombiazana sy ny ny fitavozavozana amin’ny teo aloha hatrany tsinona… Raha tsy izany, manilika ny fahavoazana ankehitriny amin’ny hafa na ny mpanohitra. Izany no hoe lehibe tsy meloka, tsy mba diso. Eo amin’ny fitondrana ka manao kabary tsy valina.
Tsy vitan’izany, fatra-panome tsiny ny teo aloha sy hafa amin’izany. Hadio sy ho afa-maina amin’izany ve ny tena na toy inona filaza? Tsy takona afenina ny tsy fahombiazana, vao mainka manampy trotraka ny hakanosana amin’ny tsy fahasahiana mijery sy milaza ny tena zava-misy marina.
Lazaina mandrakariva ny hoe mahalala tsara ny fahasahiranam-bahoaka. Saingy tsy hita mazava izay tena afitsoka hamahana na hanamaivanana ahay izany. Fanilihana andraikitra amin’ny teo aloha sy ny hafa hatrany no atao. Zazabodo sy bado ny vahoaka? Na hararaotina ny hoe fahendreny…
Lazaina fa ny fanakorontanana sy ny hoe fanonganam-panjakana amin’izay mihetsika rehetra no tsy hisian’ny fahamarinan-toerana politika, tsy ahazoana manao asa fampandrosoana. Amin’izany, loza raha hanome tsiny. Izany no ananana sy betsaka any? Na izay eo an-tanana tokoa no azo omena…
Mby aiza ny hoe tolo-tanana hifanakalo hevitra? Tsy mangarahara izay atao, ankifonofono lasa honohono. Hahagaga ny tsy fifampitokisana? “Raha mampiasa olona ianao, tsy tokony hisalasala aminy; raha misalalasa aminy ianao, tsy tokony hampiasa azy”, hoy ny ohabolana sinoa izay.
Fantatra izao ny tetiandrom-pifidianana. Anjaran’ny tsirairay ny mandinika, manapa-kevitra…